Akụkọ - Walmart na-akọ ụkọ akwụkwọ mposi na ihe nhicha na ụlọ ahịa ụfọdụ
New York (CNN Business) Ndị ahịa na-ebugharị ọzọ na ngwongwo akwụkwọ na nhicha na mpaghara nke United States siri ike site na ibute ọrịa coronavirus, na-eduga na shelf efu na ụfọdụ ụlọ ahịa Walmart.
Ndị isi na Walmart (WMT), onye na-ere ahịa kacha ukwuu na mba ahụ, kwuru na Tuesday na usoro ntinye agbatịbeghị na ịrị elu na-arịwanye elu, na ngwongwo ndị a esiwanye ike ịchekwa ebe niile na ebe dị nkọ na nje virus ọhụrụ. United States edekọwo ihe karịrị 100,000 kwa ụbọchị na-ebute ọrịa ruo izu abụọ n'izu, na Monday kọkwara ihe karịrị 166,000 ọhụụ ọhụrụ.
"Anyị na-ahụ nnukwu ọdịiche, dabere na obodo ndị ị nọ na ya," Walmart US CEO John Furner kwuru na oku na ndị nyocha Tuesday mgbe Walmart kwuchara ụgwọ ọrụ ọnwa atọ ọ bụla. "The kpọmkwem edemede ebe anyị nwere ọtụtụ nsogbu n'oge ugbu a ga-asa anụ ahụ na ihicha onunu."
Storeslọ ahịa nri ebe nri chọrọ ime ka ọ bụrụ obere ihe nro ịtụ iwu na ntanetị n'oge oyi a
Walmart CEO Doug McMillon kpọrọ ya "ndakpọ olileanya" ịhụ "ọtụtụ ego na-enweghị ego dị ka anyị nwere na ndị na-eri ihe ugbu a n'ozuzu ha," ọ bụ ezie na o kwuru na ọnọdụ ahụ ka mma kemgbe oge opupu ihe ubi. O kwusiri ike na Walmart dị njikere ịkwado ọchịchọ ahụ karịa ka ọ dị na mbụ n'afọ.
"Ọ na-adị m ka anyị ga-arụ ọrụ n'oge a karịa ka anyị mere n'oge mbu," McMillon kwuru.
Walmart etinyebeghị iwu maka ụlọ ahịa na ahịa izu oke maka ndị ahịa. Mana ndị na-elekọta ụlọ ahịa nwere ikike “mejuputa ihe njedebe dabere na ahụmịhe ụlọ ahịa ha akọwapụtara iji nyere aka kwado nnweta ngwaahịa,” Delia Garcia, ọnụ na-ekwuchitere Walmart, kwuru na email.
N'oge na-adịbeghị anya, ndị na-ere ahịa ahụ bidokwara ịgụta ọnụ ọgụgụ ndị ahịa n'ime ụlọ ahịa ya dị ka ihe nchekwa.
Otutu uzo ndi ozo ndi ozo abanyeghachila na akwukwo mposi, akwa nhicha ahihia na ihe nhichapu ogwu, na-enwe olile anya idobe ihe ndi ha.
Na Kroger (KR), ndị ahịa nwere ike ịzụta ihe abụọ kachasị ma ọ bụrụ na a bịa n'ihe ndị dịka akwa anụ ahụ, akwa nhicha akwụkwọ, nhichapụ disinfecting na ncha aka. Giant, ihe oriri na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ, mere ka njedebe nke otu na ịzụta nnukwu akwụkwọ mposi na mpempe akwụkwọ nhicha akwa na anọ na obere akwụkwọ mposi na akwa nhicha akwụkwọ.
HEB na Texas etinyewo ụkpụrụ yiri nke a na izu ndị na-adịbeghị anya. Fọdụ ụlọ ahịa HEB ewepụtala oke abụọ na ịzụrụ ọgwụ ọgwụ na-egbu nje, ebe ụlọ ahịa ndị ọzọ nwere obere akwụkwọ mposi na akwa nhicha akwụkwọ abụọ.
Ihe dị ka 21% nke ngwaahịa akwụkwọ dịka akwụkwọ mposi na akwa nhicha akwụkwọ na 16% nke ngwaahịa nhicha ụlọ anaghị aba uru n'oge izu na-agwụ na November 15, dị ka data sitere na ụlọ ọrụ nyocha ahịa ahịa IRI. Dịka, ihe dị ka 5% nke ngwaahịa anaghị adị na ngwaahịa.